Ahoana no fomba ahazoako ny "backlinks" ambony avo?
Raha mbola manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahana manohana bakalorea manana tranokala avo lenta, dia azoko antoka fa eo amin'ny toerana mety ianao. Ahoana no fomba ahazoako miverin-dàlana ambony PR? Eto ambany eto aho dia hahita fijery fohy momba ireo telo, izay mety ho nasongadina indrindra, tranonkala ahafahanao mahazo izay rehetra ilainao - haingana, tsotra, ary tsy mandoa dollar. Raha ny amiko, mino aho fa ireto tranonkala manaraka ireto (YouTube, Wikipedia, ary Google Plus) no toerana tsara indrindra ahafahana miverin-dàlana ambony PR.
Mariho anefa, fa tsy toy ny raozy mampiavaka azy amin'ny fomba mahazatra, ny fihenan-dRajo avo dia tsy asa mora foana. Na izany aza, tsy ilaina ny manahy - ny tanjona dia azo tanterahina amin'ny farany, raha ny marina no atao. Noho izany, andeha hojerentsika ireo tranokala avo lenta ireo.
Ny fampiasana ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy Google Plus angamba no tsotra sy mbola tsara PR backlinks ho an'ny tranokalanao. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny mizara lahatsoratra iray amin'ny blôgy izay omena ny Google backlinks amin'ny fahefana ambony indrindra ho setrin'izany.
Tsy ilaina ny milaza fa YouTube no tarihan'i Google no tranonkala malaza indrindra eran-tany, miaraka amin'ny fitsidihana isan'andro isan-kerinandro manaraka ny isa ara-potoana ny sehatry ny fikaroka hikaroka mihitsy. Noho izany, ity haino aman-jery an-tserasera ity dia toerana tsara ahafahana miverin-dàlana ambony PR - amin'ny alàlan'ny famoahana lahatsary. Ary tadidio fa ny Youtube dia fantatra amin'ny alàlan'ny fahefana nomen'ny fahefana azy ho 100 avy 100. Tsy ratsy, eny? Noho izany, amin'ny fampiasana ny serivisy mba hividianana rakitra avo lenta, tokony hifanaraka amin'ny youtube ianao. com, mandroso amin'ny famoahana lahatsary ao amin'ny tranonkala, ary farany amin'ny fametrahana ny famaritana lahatsary miaraka amina rindranasa mitondra mankany amin'ny tranonkalanao.
. Voalaza ihany koa fa efa tena mahaleotena sy tanjona izy io, arak'izay nokarohina sy novolavolaina tamin'ny asa an-tsitrapo. Raha jerena ny fahefana manana sehatra ho an'ny sehatra avo lenta (score 100 of 100), ny fampiroboroboana avo lenta amin'ny Wiki dia hampitombo ny fahatokisana sy ny fitokisana ny tranonkalanao manokana.
Amin'ny ankapobeny, misy fomba roa azo atao hahazoana rindran-damina any, fa ny zava-drehetra dia mety ho simba haingana raha vao ny fanamarinana marina. Midika fa matetika ireo mpampiasa mivelona dia mangataka fanamarinana manitsy alohan'ny hamoahana ny fanitsiana. Izany no mahatonga ny backlinks ho mety hanjavona rehefa afaka andro vitsivitsy noho ny fanamarinana toy izany. Toy izao no tokony hataontsika. Voalohany, raha mamorona pejy vaovao vaovao ao amin'ny Wiki, tehirizo eo ambany sehatry ny dingana tsy misy famoahana, ary hahazo ny backlink.
Ny safidy faharoa izay nosedraiko dia miompana amin'ny pejy iray amin'ny Wiki, na dia tsy malaza aza. Ny tena mahavariana eto dia ny hoe tsy azo atao mihitsy ny manamarina ny fanaraha-maso an-tanana. Noho izany, ny lanjan'ny liona amin'ny pejy tsy dia malaza dia tsy azo ihodivirana tsy azo ihodivirana foana. Manoro hevitra aho mba hampiasa ny fampiasana azy manokana - amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy mampiseho ny tranokalanao. Tena marina izany Source .